Toamasina: lehibena jiolahy voasambotry ny polisy | NewsMada
Toamasina: lehibena jiolahy voasambotry ny polisy
Voasambotra ny alarobia 10 oktobra teo, raha efa nifanenjehana tany Ambalakisoa, nihazo an’ i Dépôt, ary hatrany amin’ny « pont mainty » ilay lehibena jiolahy anisan’ny mpampihorohoro ny fokontany maro ao Toamasaina. Efa fanintelony voasambotry ny polisim-pirenena, saingy votsotra hatrany. « Ankilany, mahay manala ho azy ny rojovy ifatorany izy ary afaka miova ho zavatra hafa raha sendra ifanenjehan’ny mpitandro
filaminana », raha ny fanazavana. ” Rajaonah Juducael 22 taona, fantatry ny rehetra amin’ny anarambositra hoe Bebeto, sy ny namany roa lahy izay efa maro ny olona lasibatra vokatry ny asa ratsiny ary saika ahitana ny fitarainana sy fitorian’ny olona maro avokoa ny biraona komisaria eto an-dRenivohitr’ i Toamasina », hoy ny kaomisera, Razafindahy Manitra.
Rava, ny alarobia teo koa ny tambajotran-jiolahy, tarihin’ i Kawitry sy ireo namany miisa fito
lahy. Voasambotry ny polisy tao amin’ny fokontany Mangarivotra sy hatrany Andranomadio ary Mangarano, sarona niaraka tamin’ izy ireto ihany koa ny bala 22 Longa Rifle ana poleta. Miantso ny olona hametraka fitoriana ny kaomisera. Ny olona anefa misalasala ihany noho ny tahotra valifaty, satria voalaza fa tsy mijanona ela any am-ponja ireo olon-dratsy ireo.